Studium Muqdisho oo maanta laga bilaabay Olole nadaafadeed + Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Studium Muqdisho oo maanta laga bilaabay Olole nadaafadeed + Sawirro
Ardaan Yare 30 August 2018 30 August 2018
Garoonka ciyaaraha kubadda Cagta ee Muqdisho Studium Muqdisho ayaa waxaa ka soconaya olole balaaran oo dhanka nadaafadda ah kaasi oo qeyb ka ah barnaamijka isxilqaan si dib loogu so celiyo bilicdii garoonkaasi uu lahaa,waxaana manata ka qeybgalay mas’uuliyiin uu hoggaaminayay Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya.
Xubnaha maanta ka qeybgalay ololahaasi nadaafadeed waxaa kamid ah Ra’iisul wasaare kuxigeenka Dalka,xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda,maamulka Gobolka Banaadir,ciidanka Qalabka sida,fanaaniin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Raiisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay howlaha nadaafadeed oo ay maanta kaga qeybgaleen garoonka kubadda Cagta ee Muqdisho ayaa sheegay in barnaamijka isxilqaan dib laagu dhisayo garoonkaasi.
Sidoo kale waxaa uu sheegay mudane Xasan Cali in shacabka Soomaaliyeed looga baahanyahay in ay ka qeyb qaatan dib u dhiska dalkooda,si looga maarmo gacmo shisheeye,wuxuuna intaasi ku daray in la wareegitaanka garoonkaasi ay qeyb ka tahay balanqaad ay sameysay dowladda,islamarkaana haatan uu dhalinyarada gacanta u soo galayo.
Muddo ku siman 10 sano kadib ayaa dhawaan waxaa halkaasi ka guuray ciidamadii midowga Afrika ee AMISOM,kuwaasi oo ku wareejiyay dowladda Soomaaliya,maadaama haatan la joogo xiligii dib u dhis lagu sameyn lahaa kaabayaashi dhaqaalaha ee dalka.